NR-BL342 Refrigerator - Panasonic
တံခါး2ပေါက်ပါ အပေါ် ရေခဲခန်းဖြင့် ရေခဲသေတ္တာ
သန့်ရှင်းစွာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းဖြင့် အစားအစားများကို ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စားသုံးလိုက်ပါ။
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော စားသောက်မှုပုံစံသည် သင့် ရေခဲသေတ္တာထဲရှိ အစားအစာများဖြင့် အစပြုသည်။ Panasonic ရေခဲသေတ္တာများသည် အစားအစာများ နေ့စဉ် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်နေစေမှုကို ပံ့ပိုးပေးထားသည့်အတွက်
သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော နေထိုင်မှုဘဝပုံစံများရရှိစေနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သန့်ရှင်းသော လေဖြင့် အမြဲမပြတ်ဝန်းရံထားသော လတ်ဆတ်ပြီး အစိုဓာတ်ပြည့်ဝနေသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စားသုံးနေစေရသည့် သဘောဖြစ်ပါသည်။
အဝကျယ်သည့်အတွက် ပစ္စည်းများကို အလွယ်တကူ လှမ်းယူနိုင်သည်
Wide Fresh Case က ပုံးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ချိန်တွင် အပေါ်သို့ လှန်တင်နိုင်သည့် အဖတ်ကို သုံး၍ ပိုမိုကြီးမားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ယူနိုင်စေသည်။ 90%* စိုထိုင်းဆနှင့် မပြောင်းမလဲရှိနေသော အပူချိန်က သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လတ်ဆတ်ပြီး ကြွပ်ရွစွာ တာရှည်ခံအောင် သိမ်းထားပေးရန် အကောင်းဆုံး အခြေအနေများကို ရရှိစေသည်။
*ဒေတာကို ပြင်ဆင်ထားသူမှာ Panasonic ဖြစ်ပါသည်။
Ag Clean သည် ရေခဲသေတ္တာတစ်ခုလုံးထဲရှိ လေများကို သေချာနှံ့စပ်အောင် သန့်စင်ပေးပါသည်။ Ag Clean စစ်ထုတ်ကိရိယာထဲရှိ ငွေအိုင်ယွန်းများသည် မှိုနှင့် ဘက်တီးရီးယား ပေါက်ဖွားမှုကို 99.9%* သုတ်သင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး မကောင်းသည့် အနံ့အသက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။
*Boken အရည်အသွေး အကဲဖြတ်မှု အဖွဲ့အစည်း၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားသည်။ စမ်းသပ်မှု မှတ်တမ်း နံပါတ်- No. 20215058561-1
သုံးစွဲသူအတွက် အဆင်ပြေသော နေရာအကျယ်အဝန်းဖြင့် တစ်မိသားစုလုံး စိတ်ကျေနပ်မှုပေးလိုက်ပါ
များစွာဝင်ဆံ့သော ရေခဲခန်းက အမြောက်အမြားဝယ်ယူထားသည့် ပစ္စည်းများအတွက် အကိုက်ညီဆုံး သိမ်းဆည်းရန်နေရာများစွာကိုပေးသည်။ သီးခြား သိမ်းဆည်းခန်းက ပစ္စည်းများကို သေသေသပ်သပ်ရှိအောင် အဆင်ပြေပြေ သိမ်းဆည်းပေးသည်။ ရေခဲဘူးက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေ့လျားနိုင်သည့်အတွက် သိမ်းဆည်းရန် နေရာ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး ဖြုတ်ထားလျှင် နောက်ထပ်နေရာပိုပြီးပင် ကျယ်စေသည်။
*ဓာတ်ပုံထဲတွင် NR-BL381PS မော်ဒယ်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပါသည်။ NR-BL342 တွင် Ag အသားခန်း မပါဝင်ပါ။
ကောင်းစွာ အအေးခံထားသော အစားအစာများနှင့် သောက်စရာများကို နှစ်သက်စွာ သုံးဆောင်ပါ
သောက်စရာများကို အအေးပေးရန် သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုကို မြန်ဆန်စွာ အေးအောင်လုပ်ရန် Extra Cool Zone က အလန်းစား ဖြစ်သည်။
ကာဗာက ပစ္စည်းများကို 2°C ခန့်တွင် အေးစေပြီး ပုံမှန် 4°C ခန့်တွင် အေးပေးသည့် ရေခဲအကန့်များထက် အနည်းငယ် ပို၍ အေးပါသည်။
*ဓာတ်ပုံထဲတွင် NR-BL381PS မော်ဒယ်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပါသည်။
ခေတ်မီ၍ စတိုင်ကျလှပသော အပြားဒီဇိုင်း
စတိုင်ကျသော ဒီဇိုင်းတွင် ပြေပြစ်လှပသော လက်ကိုင်တစ်ခုပါဝင်သည်။ ထောင့်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ တစ်ဆက်တည်း ပြေပြစ်ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်များက လှပသောသွင်ပြင်ကိုပေးစွမ်းသည်။ ဤရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့် စတိုင်ကျလှပသော အပြားဒီဇိုင်းသည် မည်သည့်မီးဖိုချောင်ပုံစံမျိုးနှင့်မဆို လိုက်ဖက်သည်။
စွမ်းအင်ကို အလိုအလျောက် ချွေတာပေးသည်
ECONAVI အာရုံခံစနစ်သုံးခုက သုံးစွဲမှုအခြေအနေများကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီး မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာက ၎င်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ INVERTER ကွန်ပရက်ဆာသည် အအေးပေးမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံး ချိန်ညှိရန် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ရလဒ်များနှင့်အညီ မော်တာလည်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးသည်။
1. အတွင်းပိုင်း အပူချိန် အာရုံခံစနစ်
2. အခန်းအပူချိန် အာရုံခံစနစ်
3. တံခါး အာရုံခံစနစ်
325L (IEC 62552:2007 Gross)
601.5 x 657 x 1645 mm